विम पुस्तकालयले दिएको ज्ञान र सीपले शिक्षा, संस्कृति र साहित्यमा बागलुङ अब्बल ! – ebaglung.com
२०७३ माघ ८, शनिबार २०:४२	Top News, थप समाचार
बागलुङ २०७३ माघ ८ । देशको पश्चिम क्षेत्रकै सबैभन्दा जेठो विद्यामन्दिर पुस्तकालयको शनिवार सम्पन्न ७० औं साधारणसभा तथा ३४ औं अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै धौलागिरि अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सागर राजभण्डारीले विम पुस्तकालयले दिएको ज्ञान र सीपको कारण अहिले पनि शिक्षा, संस्कृति र साहित्यमा बागलुङ अब्बल भैरहेको बताए । उनले पठन शैलीको विकास गर्दा शिक्षाको गुणस्तरमा पनि टेवा पुगेको बताए ।
उद्घाटन समारोहमा उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य निर्माणकुमार श्रेष्ठ बासु, बागलुङ उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष बसन्तकुमार श्रेष्ठ, सल्लाहकारहरु देवबहादुर श्रेष्ठ, काजी रोशन, प्रेम छोटा, लालचन्द्र राजभण्डारी, शैलेन्द्र श्रेष्ठ, बिना कार्की, पूर्व अध्यक्ष विकास शाक्य, महेशचन्द्र प्रधान, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष मुकेशचन्द्र राजभण्डारी लगाएतले बोलेका थिए ।
आज सम्पन्न अधिवेशनले राजेशचन्द्र राजभण्डारीलाई पुन दोश्रो कार्यकालका लागिपनि अध्यक्षमा चयन गरेको छ । पुस्तकालयको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार अभियानमा पहल गरेको भन्दै अधिवेशनले राजभण्डारीलाईनै दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गरेको हो । अध्यक्षले अन्य पदाधिकारी चयन गर्ने प्रावधान भएकोले अधिवेशनबाट अध्यक्ष मात्र चुनिएका हुन् ।
उक्त अवसरमा सचिव राम थापा अविरलले प्रस्तुत गरेको प्रगती प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो ।
समारोहमा पुस्तकाध्यक्ष मञ्जु केसी, पुस्तकालयको बाल विकास केन्द्रकी सहजकर्ता उमा सुवेदी लगायतले पुस्तकालयको अनुभवका बारेमा बोलेका थिए । सोही अवसरमा पूर्व अध्यक्ष महेशचन्द्र प्रधानले आमा बाबुको स्मृतिमा स्थापना गरेको हरिमोहन स्मृति कोष बाट पूर्व अध्यक्ष महेशकुमार राजभण्डारीलाई रु १० हजार नगद सहित सम्मान गरिएको थियो ।
त्यस्तै पुस्तकालयमा नियमित पढ्न आउने पाठकबाट प्रतापराज पन्तलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो । उक्त पुरस्कार रत्न श्रेष्ठ पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष प्रेम छोटाले स्थापना गरेको कोषबाट दिइएको हो ।
पुस्तकालयले अहिले एक व्यक्ति एक हजार रुपैयाँका दरले सहयोग संकलन गरेर विद्युतीय पुस्तकालय निर्माण अभियान संचालन गरिरहेको छ । त्यसका लागि गैर आवासीय नेपालीहरुले पनि सहयोग गरेका छन् । पुस्तकालयको अध्यक्षमा पुन निर्वाचित भएका राजभण्डारीले दोश्रो कार्यकालमा पुस्तकालयलाई आर्थिक र भौतिक रुपमा अझै सवल बनाएर लैजाने प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबै पदाधिकारी, सदस्य र सल्लाहकारलाई अध्यक्ष राजभण्डारीले प्रशंसापत्र पनि प्रदान गरेका थिए ।
अधिवेशन पुस्तकालयका अध्यक्ष राजेशचन्द्र राजभण्डारीको अध्यक्षता, सचिव राम थापा अविरलको संचालन र उपाध्यक्ष रामप्रसाद शर्माको स्वागतमा सम्पन्न भएको थियो ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको भेला बुर्तिबाङमा !